मार्च 24, 2018 मार्च 24, 2018 साइन्स इन्फोटेक	7 Comments दम्पति, सुत्नुअघि
सुत्नुअघि हरेक दम्पतिले गर्नुपर्ने ५ महत्वपूर्ण कामहरु ! श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् भनिन्छ । जीवनमा यी दुईको वीचमा मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्दछ । कहिलेकाहीँ यस्ता हुन्छ की विवाहको केही समयपछि सबै कुरा सामान्य रहेको बेला एकाएक केही उल्झन देखा पर्न थाल्दछ जसले वैवाहिक जिवनलाई नै बर्बाद बनाउने जोखिम हुन्छ ।
शायद तपाइँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर कहिलेकाहीँ सुत्ने आनीबानीलाई लिएर समेत पति र पत्नी बीचमा डिभोर्सको स्थिति पैदा हुन्छ । हरेक ठाउँ आफ्ना केही नियम र शर्तहरु हुन्छन् मान्छेका । त्यसैले बेडरुममा पनि केही कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ अनजानमा गरिएका गल्तीहरु सम्बन्धमा भारी पर्न सक्दछन् । त्यसैले यी नियमहरु पालना गरी तपाइँले पनि आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धलाई नयाँ रंग दिन सक्नुहुन्छ । सुत्नुअघि हरेक दम्पतिले गर्नुपर्ने ५ महत्वपूर्ण कामहरु यस प्रकार छन् ।
१. सुत्ने समय एउटै गर्नुहोस
यदि तपाइँ पति पत्नी दुबै जनाको सुत्ने समय फरक-फरक छ भने सबैभन्दा पहिले यो बानीलाई सुधार्नुस् । कोसिस गर्नुहोस् की तपाइँ दुईजना सँगै सुत्ने । दुई जनामा एकजना मस्त निदाइरहने र अर्कोले आफ्ना काम रातभर गरिरहने नहोस् ।
२. सुत्नुभन्दा १ घण्टा अघि ल्यापटप, मोबाइल तथा टेलिभिजन थन्काउनुहोस्
कोसिस गर्नुहोस्, सुत्नुभन्दा पहिले तपाइँको हातमा मोबाइल नहोस् । बेडरुममा टिभी पनि नराख्नुस् । सम्भव छ भने एउटा म्यूजिक प्लेयर राख्नुहोस् ता की रातमा मन्द स्वरको संगीतको मज्जा लिन सकियोस् । सुत्नुभन्दा अघिको समयमा ल्यापटप, मोबाइल तथा टेलिभिजनमा समय खर्चिनुको साटो पार्टनरसँग गफिएर समय काट्नु राम्रो हुन्छ ।
३. एकअर्कामा पूरा ध्यान राख्नुहोस
एकअर्कामा पूरा ध्यान दिनुहोस् । तपाइँका स-साना तारिफले पनि पार्टनरमा ठूलो स्थान राख्दछ । कोसिस गर्नुस्की सुत्नुभन्दा पहिले तपाइँले आफ्नो पार्टनरलाई यो अनुभुति गराउनुस्की ऊ आफ्नो लागि कति स्पेशल छ । यस्तो महिनामा एक पटक होइन हरेक दिन गर्नुपर्छ ।
४. प्रेम दर्साउनुहोस्
अलग अलग तरिकाले प्रेम दर्साउनुहोस् । छोएर, प्रसंसा गरेर प्रेमको अनुभुति दिलाउनुहोस् ।
५. गुडनाइट भन्नुहोस
गुडनाइट किस दिन नभुल्नुहोस् । स-साना कोसिसहरुले पनि माहोललाई सकारात्मक बनाइदिन्छ र आपसी सम्बन्धलाई मजबूत बनाउँछ भन्ने कुरा नभुल्नुस् । त्यो सँगै रात्रीकालीन सत्र त छँदैछ ।
← श्रीमान र श्रीमती वीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने उपायहरु
जनकपुरको जानकी मन्दिर →
7 thoughts on “सुत्नुअघि हरेक दम्पतिले गर्नुपर्ने ५ महत्वपूर्ण कामहरु”
Pingback:महिलाहरुले रातमा सुत्नुअघि यस्ता कामहरु गर्नाले घरमा लक्ष्मीको बास हुने
Pingback:यस्ता छन् श्रीमान र श्रीमतीवीचको सम्वन्ध बिग्रिने कारणहरु, जानी राखौ